सम्पादकीय Archives - Hello Punarwas
कर्तब्यपथमा निरन्तर अगाडि मोफसलमा यो यात्रालाई चलायमान गराउँनु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु सो सरह हो । यस कुरालाई भलिभाँती बुझ्दा बुझ्दै पनि केही आसले त केही हर्षाेल्लास हौसिएका छौं इतिहासमा नाम लेखाउँनलाई । दृढ संकल्प, शुभाशय र उत्कट अभिलाषालाई पोको…Read more
गौतम बुद्ध पनि एक उच्चतम बिन्दू हो ।
ब्रहमाण्डमा दुःख छ र दुःखलाई पराजित गर्न सके शान्ति हत्याउन सकिन्छ भन्ने ज्ञानका प्रबर्तक तथा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जयन्ती वैशाख पूर्णिमाका दिन विश्वभर मनाउने प्रचलन छ । बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र मरण वैशाख पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यस दिन…Read more
चुनाबमा हाम्रा हैन सर्बथा राम्रा ल्याउँ !
चुनाव नजिकैएसँगै जताततै वादैवाद, सिद्धान्त नै सिद्धान्त, गुटबन्दी र विचारको चर्काे चहल खेल समाजमा छरपस्टिएका छन् र लाग्छ वौद्धिक विकासको पराकाष्टा नै नाघिएको जस्तो । एकाइसौं सताब्दीमा टेकिएका विकसित मष्तिस्कहरुको प्रभाव यति पनि नहोस् पनि कसरी र त्यसैले यी घटना…Read more
मतदाताहरु राजनीतिक दलका दास होइनन्
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा बिभाजन गरेर यहि आउँदो वैशाख र जेठको ३१ गते हुने पक्का पक्की जस्तो नै देखिएको छ । गाउँ, शहर, चियाचमेना गृह र सिंहदरबारसम्म चुनाबी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । राजनीतिक दलहरु महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका…Read more
कार्यकर्ता भएर हैन, इमान्दार जनता भएर भोट दिउँ
नेपाल हो घर हाम्रो, सगरमाथा धुरी । ज्यानको माया मानापाथी देशको माया मुरी । नेपालले के दियो भन्नु भन्दा पनि हामीले नेपाललाई के दियौं भन्नु पर्ने बेला आएको छ । अब नेता हैन जनता आफै पनि जागरुक हुने बेला आएको…Read more
व्यक्तिगत स्वास्थ्य र वातावरणीय संरक्षण हुनु सम्पूर्ण मानव जातिको मात्र नभई जिवित प्राणीहरूको लागि पनि यो अत्यावश्यक छ । वातावरणीय समस्याका कारण आएका विभिन्न रोगहरू दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छन् । वातावरण प्रदुषणका कारण विभिन्न किटाणुहरूको जन्म भई त्यसको संक्रमणले हाम्रो…Read more
केहि दिन अघिमात्रै क्रिसमसको शुभकामनाले सञ्जालका भित्ताहरु रंगिएका थिए । फेरि इश्वी सम्वत्को नयाँ वर्ष आगमनको पूर्व संध्यादेखि नै सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु शुभकामना आदान–प्रदानका झिलिमिली तस्विर र सन्देशहरुले रंगिएको देखियो । हुन त नेपालीहरु विक्रम सम्वत्को पात्रो अनुसार बैशाख १…Read more
संघीय प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा असहमत पक्षबाट चर्काइरहेको पछिल्लो अराजक आन्दोलनले मुलुकलाई ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ । उद्योग, कलकारखाना, शैक्षिक संघसंस्था लगायत देशको प्रमुख व्यापारिक नाकाहरु ठप्प भइदिनाले जनता अभावको तीतो चाख्न बाध्य छन् । गत भदौं सात गते कैलालीको टीकापुरमा…Read more
समाज जहाँ हामी बस्छौं, हाम्रा सन्ततीहरु हुर्कन्छन् । आफ्नो र देशको सुन्दर भविष्य कोर्न यहीबाट शुरु हुन्छ । समाजबाट हामीले थुप्रै कुराहरु सिक्छौं र सिकाउछौं पनि । त्यसैले समाज उन्नत हुनु निकै जरुरी छ, स्वच्छ हुनु जरुरी छ । समाजमा…Read more
‘गुलाबलाई पत्थर भन्दैमा गुलाबले बाँस्ना दिन छोड्छ र ?’
जुनसुकै मुद्दा र जुनसुकै मागलाई पनि अगाडि राख्दा पूरा हुन्छ भन्ने सोंच आज–भोलि सघन हुँदैछ । सानो, ठूलो, तेरे राज्य मेरो राज्य, यो धर्म ऊ धर्म, यो जात ऊ जात भनी–भनी बिभिन्न बाहनामा हामी आपसमै चकनाचूर हुदैछौं । संयम, सामाजिक…Read more
‘आफुले पिउँने कुवाँको पानी मात्र मीठो छ भन्नु धार्मिकता हैन’
धर्मको नाममा पटक–पटक बिबाद उठेको सुन्दा र देख्दा निकै आश्चार्य लागेर आउँछ । यसरी किन ब्यर्थै धर्मको नाममा बिबाद खडागरेका होलान् ? किन ब्यर्थै अर्थको अनर्थ लगाइरहेका छन् । धर्मलाई कुनै खतराजन्य पदार्थसँग मेलान गर्दै मानिस यस्को पिछलग्गू बनेर लागिरहेका…Read more
नेताजीहरुसँग यसको उत्तर छ ?
हरेक हिउँदमा काठमाडौंबाट पुनर्वासमा रात्रीबस गुड्दछ र चिल्लो गाडीहरुको अगामनसँगै नेताहरुको आवात–जावत पनि बाक्लिदै जान्छ । गुड्नेदेखि उड्नेसम्मका यातायातहरुमा नेता जीहरुकै बर्चश्व कायम भएको हो की यस्तै प्रतीत हुने गर्दछ । स्वागतका लागि लामबद्ध जनताहरु स्वागतम्का तूल र पुष्प गुच्छा…Read more
कञ्चनपुर जिल्ला र भारतको लखिमपुर जिल्लासँग जोडिएको क्षेत्र पुनर्वास÷बेलौरीमा भारतको हस्तक्षेपकै कारण २०२८ साल देखि २०३४ सालसम्म तत्कालीन वस्ती विकास कम्पनीले पुनर्वासको रुपमा बसोबास गराएको उक्त नेपाली भुमिमा भारतीयहरुको ज्यादतीलाई नेपाली नागरिकबाट प्रतिकार गर्दै आएका थुप्रै घटनाहरु पुनर्वासीलाई ताजै छ…Read more
नेपाल सरकार (मं.प.)को मिति ०७१÷०१÷२५ गतेको निर्णयले साविक परासन, त्रिभुवनवस्ती र कालिका गा.वि.स.लाई मिलाएर पुनर्वास नगरपालिका घोषणा गरे लगतै यस क्षेत्रको परिवेश निकै बदलिदो छ । परिवर्तित परिबेश सँग–सँगै अधिकांश नगरवासीहरुको आशा आकंक्षाहरु पनि मौलाउँदै आएको सत्य हो । यद्यपी…Read more
जनताका लागि सेतु
राज्यको केन्द्रीय तहबाट होस् या जिल्ला सदरमुकामका नजरबाट, कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र पुनर्वास निकै पिछडिएको क्षेत्रको रुपमा लिने थुप्रै आधारशिलाहरु हामीमाझ स्तम्भित छन् । पुनर्वासमा बिभिन्न धर्म, जाती, क्षेत्र, संस्कृतिका जनताहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । महेन्द्र राजाका पालामा यस क्षेत्रलाई…Read more